Japanese pearls dhaqanka / akoya Pearls / Pinctada fucata
Noocyada asaliga ah ee dhaqanka Japan ee loo yaqaan 'akoya pearls' waxaa loo yaqaan 'pearada pearl', Pinctada fucata martensii, taas oo aan ka weynayn 6 si 8 cm xajmiga, sidaas darteed akoya pearl ka weyn 10 mm dhexroor waa dhif iyo naadir qiimo badan. Maanta, mollusk hybrid ah waxaa loo isticmaalaa labada Japan iyo Shiinaha ee wax soo saarka akoya akoya.
Maanta, luuliyada dhaqanka ee suuqa ayaa loo qaybin karaa laba qaybood. Qeybta koowaad waxay dabooshaa luuliyo la korsado, oo ay ku jiraan Akoya, Koonfureed iyo Tahiti. Laanahani waxay yihiin gonad koray, inta badan hal luul ayaa la koray waqti. Tani waxay xadaynaysaa tirada lakabka xilliga goosashada. Luulaha waxaa badanaa la goostaa sannad ka dib akoya, 2 ilaa sanado 4 ah ee Tahitian iyo Badda Koonfureed, iyo 2-7 sano oo biyo ah. Nidaamka loo yaqaan 'perlivio' ayaa waxaa markii ugu horreysay soo saaray William Bieber-Kent, kaas oo u gudbay Tatsuhei Mise iyo Tokichi Nishikawa oo ka yimid Japan. Qeybta labaad waxaa ka mid ah maadooyinka aan biyaha lahayn ee la isku qurxiyey, sida Biwa ama luuliis Shiineeys ah. Marka ay ku koraan xarkada, halka garab kastoo ilaa 25 loo adeegsan karo lafdhabarta, luulnadani waa kuwo aad u badan oo soo gala suuqa. Tilmaameyn heer sare ah oo tayo leh ayaa ka dhacay tobankii sano ee la soo dhaafay markii hore ee bariiska hadhuudhka ah oo la isku qurxiyo la barbar dhigo lakabka hareeraha ee maanta. Labadii sanadood ee u dambeeyay ayaa si weyn u dhow dhow lafa-qabatada nucleated nucleated ilaa 15mm dhexroorka ayaa la soo saaray oo leh qalaaleyaal metallic.
Qalabka nucleus ee lakabka loo yaqaan 'pearl cultured' ayaa guud ahaan ah cirifka laga sameeyay mooska mooska. Iyada oo ay weheliso warqad yar oo ah naqshadda yaryar oo ka mid ah mollusk kale, kabacdo deeq ah, si ay ugu adeegto sidii xajin ka samaysan laaluush, waxaa lagu qali karaa gonad, taranka taranka, mollusk. In dhirta caadiga ah ee dhirta, kaliya qaybta unugyada ayaa loo isticmaalaa kiisaska intooda badan, waxaana lagu geliyaa xuubka caanaha ee muusiga martida ah. South Sea iyo Tahitian Pearl pearl, oo sidoo kale loo yaqaan Pinctada maxima iyo Pinctada margaritifera, kuwaas oo ka badbaaday qalliinka ka dib si looga saaro lakabka dhamaystiran, waxaa badanaa la geliyaa laadyo cusub oo weyn oo qayb ka ah nidaam la mid ah ka dibna dib loogu celiyo biyaha kale 2 3 sanadka koritaanka.